Apple na-akwadebe ego maka Black Friday a | Esi m mac
Anyị nọ n’etiti onye na-azụ ahịa na-azụ ahịa nke aghụghọ jiri mmụọ siri ike kpalite site na ọtụtụ onyinye, nkwalite na mbubata ego na-ada ebe niile. Ihe na mbu bụ onyinye enyere naanị otu ụbọchị, n'oge na-adịghị anya, ha gbasaa na ngwụcha izu niile, ruo izu ahụ dum, ọbụnadị n'afọ a, ha malitere izu gara aga n'ihe banyere ọtụtụ ndị na-ere ahịa. Anyị na-ekwu maka ya Black Friday, na "Black Friday" nke nwere mgbọrọgwụ na United States na nke na-ezo aka na ụbọchị mgbe Ekele gasịrị, mgbe oge ịzụ ahịa Krismas malitere na ọnụ ọgụgụ na-acha ọbara ọbara nke ndị ahịa mechara gbanwee.
N'ime afọ ndị ikpeazụ Apple elelela anya n'oge Black Friday; ọ kachasị mma ịhapụ uru maka ndị na-ere ahịa, ma ọ bụ na ọ gafeela ịmelata ego. Eziokwu bu na agbagharaghi nke ukwuu n'ihi na onyinye ndia na-akawanye mma. Ma afọ a dị iche. Mgbe nkeji iri atọ na-ahụ ọdịda ahịa na ngwaike niile, anyị ga-enye ha ihe ọ bụla, yabụ na ihe niile na-ezo na 2016 Apple ga-esonyere Black Friday N'ihi na onyinye gị ga-erute Spain.
Apple ga-alaghachi na Black Friday
Dị ka o doro anya site na ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Cupertino mere, Apple ga-ebido azụmahịa na Black Friday ọzọ nke ọ fọdụrụ nanị ụbọchị ole na ole. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala ibe ọhụrụ na webụsaịtị ya, nwere ụda olu, nke ha na-ekwuwapụta na ha ga-eme "ụbọchị ịzụ ahịa pụrụ iche" na Fraịde a, dịka ndị na-ere ahịa ndị ọzọ.
Agba nke ụlọ ọrụ ahụ họọrọ dị oke mma, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma ma e jiri ya tụnyere nke ojii Black Friday, nke na-anọchite anya olile anya, dịka a ga - asị na ọ bụ ozi na - egosi na olile anya Apple ga - esonye na onyinye ndị a mechara nye mkpụrụ ya.
Ma ọ bụ na n'oge afọ gara aga Apple amachaghị banyere azụmahịa Black Friday, nkwalite na ego. Ma ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ yiri ka ha na-akwadebe ịbanye egwuregwu ahụ ọzọ.. Site na Cupertino ha na-arụtụ aka na weebụsaịtị ọhụrụ a enweghị ike ịbịa ngwa ngwa na Fraịde, yabụ Apple na-akpọ ndị ahịa ya niile ka ha laghachị na Fraịde wee lelee ihe ndị ha nwere n'ụgbọ ahịa ha.
Ọ bụrụ na ọ bụ Friday.
Anyị dị nso na ụbọchị ịzụ ahịa pụrụ iche anyị. Laghachite na Fraịde a wee chọta onyinye Krismas kacha mma.
Peeji ohuru a enyekwaghi ozi banyere “ụbọchị ahia” ahu, na-amachi oke inye onyinye anyi puru ichikota ya site na otutu edemede, egwu, foto, egwuregwu na ihe egwuruegwu na ngwa Apple.
Ya mere, o doro anya ihe Apple ga-enye anyị na Black Friday a, mana anyị ekwesịghị inwe ọtụtụ nro Ọfọn, ụlọ ọrụ ahụ enwebeghị mmesapụ aka banyere ya ma ọ ga-abụ na anyị ga-achọta azụmaahịa ka mma site na ndị na-ekesa ikike. N'ezie, oge ikpeazụ Apple sonyere na Black Friday dị na 2014 (ma ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ naanị na United States) na-enye kaadị onyinye maka inweta ngwaahịa ụfọdụ:
iPod aka - $ 25
Họrọ Beats site na ekweisi Dre - $ 25
IPad ọ bụla - $ 50
Mac ọ bụla - $ 100
N'oge gara aga, ọ na-ewetara ọnụahịa nke ngwaahịa ya, mana ọ nwụbeghị onyinye nke ndị mmekọ ọnụahịa ya.
Ndi Apple ga - emesi anyi ike iju anyi anya na / ma obu iwepu ahia n’oge Black Friday na - abia ma obu, na uzo ozo, anyi gha enweta nkwalite di nma karie site na ndi ere ahia? Ihe dị mma bụ na anyị nwere nkwenye na, oge a ee, onyinye gị ga-erute Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple na-akwadebe ego maka Black Friday a